Tsory rehefa tsy vita e !
Miarahaba anao ry Jean be fikafika a ! Manadala saim-bahoaka tsotra izao ianareo nama a ! Fa tsy hainareo mihitsy ve ny mandamina ity tanàna ity e ? Im-piry ianao no efa nanoratako teto hoe
Fa ny ampitson’iny ihany dia nivonto orona ny tena nahita sy nandre fa mbola toy ny isan’andro ihany ny zava-misy tany amin’ny faritra maromaro, ka dia ompa variraraka indray no niseho e ! Dia lasa ny saina hoe sao dia kabary natao “kopi kole” toy ilay nataon-dRafôrsa teny Mahamasina fony izy nandray fahefana voalohany aza iny niseho iny. Fa iza mihitsy ry Jean no mpanoro vohony anareo mianakavy ao ? Sa dia hararaotinareo mihitsy hoe efa andron’ny demokrasia izao, ka samy afaka miteny sy mampiesona avokoa ? Aiza ve ka terenareo fotsiny hoe mijanona hatreo ny haizim-pito, kanefa ny fomba hahatontosana izany mbola baraingo. Ny tranom-pody, hono, no vitan’ny vava. Mba araho asa ihany lahy ity fampandriana adrisa sy resaka ambony latabatra ataonareo ity. Sa kosa efa nahazo fanomezam-pahasoavana ianareo ka vao miteny ny vava dia tanteraka izay lazaina ? Dia mbola ho vitanareo ihany ve no hijery anay milomano anaty rano be sy hanao an-kiletika anaty haizim-pito amin’izao fahavaratra izao ? Mivavaka ho anareo mba ho tonga saina ka hahatontosa izay nampanantenaina izahay e !